သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: July 2008
သည်အိမ်ခန်းက တိတ်ဆိတ်လွန်းနေသည်။ အခန်းထဲက ထောင့်တစ်ထောင့်တွင် သင်ဖြူးဖျာထပ်ခင်းထားသော ကုတင်တစ်လုံးက ငြိမ်သက်စွာ။ ကုတင်ခေါင်းရင်းက ပြူတင်းက ပွင့်နေသောကြောင့် အလင်းရောင်တွေက အခန်းထဲသို့ ထိုးကျနေသည်။ ပြူတင်းပေါက်မှ လေပြေညှင်းကြောင့် ခြင်ထောင်အမိုးက သာသာလေး လွန့်လူးသွားသည်။ ကုတင်ခြေရင်းမှာတော့ အ၀တ်အစားတွေထဲ့သည့် ဗီဒိုပုလေးတစ်လုံး။ ကုတင်ခေါင်းရင်းက စားပွဲလေးတစ်ခုပေါ်မှာ ဟောင်းနွမ်းနေသော မီးတိုင်တစ်တိုင်၊ သောက်လက်စ ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက် နှင့် အလှပြဖန်လုံးလေးတစ်လုံး။ ဖန်လုံးလေးထဲက ငါးပြာကလေးနှစ်ကောင်က နှုတ်ခမ်းချင်း ထိနေကြသည်။ ဖန်လုံးလေးကို မကိုင်ပြီး လှုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲက လှုပ်ခတ်သွားသောရေလေးတွေနှင့်အတူ ရောင်စုံရွှေမှုန်ငွေမှုန်တွေကလဲ တဖွားဖွားလှပစွာလှုပ်ခတ်သွားကြသည်။ ဖန်လုံးလေးကို မြတ်နိုးစွာ ပါးပြင်မှာ ကပ်ထားလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ စားပွဲလေးပေါ်သို့ ပြန်ချလိုက်သည်။
ကုတင်ခေါင်းရင်းက ပြူတင်းပေါက်နားသို့ တိုးကပ်သွားလိုက်သည်။ ပြူတင်းပေါက်လက်ရန်းကို ကိုင်ရင်း အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ မြစ်ဆိပ်တစ်ခုကို လှမ်းမြင်နေရသည်။ မြစ်ဆိပ်က ထူးဆန်းလွန်းစွာ လူသူကင်းမဲ့နေသည်။ နေက ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေသည်။ သဗာန်တစင်းက ကမ်းစပ်မှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ကျောက်ချရပ်နားနေသည်။ ကမ်းစပ်ကလဲ ထူးဆန်းစွာ ရွှံဗွက်ကင်းစင်နေသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကျီးကန်းတစ်ကောင် အော်မြည်သံနှင့်အတူ ကမ်းစပ်လှိုင်းပုတ်သံ၊ တူထုသံတစ်ခုကိုပါ မသဲမကွဲကြားနေရသည်။
ပြူတင်းမှခွာ၍ ကုတင်နားသို့ မရဲတရဲတိုးကပ်သွားသည်။ ပြူတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကလေက ကသုတ်ကရက် တိုက်ခတ်လာသည်။ ဆံပင်တွေကို စုကိုင်လိုက်ရင်း ကုတင်ပေါ်က သင်ဖြူးဖျာပေါ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လှဲလျောင်းနေသော အပြာရောင် လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးနားသို့ ခပ်ဖြေးဖြေး တိုးကပ်သွားသည်။ လွယ်အိတ်ကလေးက ဟောင်းနွမ်းနေပြီ။ ထိုလွယ်အိတ်လေးကိုမြင်တော့ ရင်တွေက မသိမသာတုန်ရင်လာသည်။
လွယ်အိတ်လေးဘေးမှာ ဖြည်းညှင်းစွာထိုင်ချလိုက်သည်။ လွယ်အိတ်လေးကို ကောက်ယူလိုက်သည်။ ရင်ခွင်မှာ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသည့် နေ့တစ်နေ့ကို မြင်ယောင်လာမိသည်။ ဆံပင်တွေကို တစ်ချက်ခါလိုက်ပြီး လွယ်အိတ်ထဲကို လက်နှင့်စမ်းကြည့်လိုက်သည်။ လွယ်အိတ်ထဲမှာ ကပ်ပြားအချို့ရှိနေပါလား။ ကပ်ပြားလေးတစ်ခုကို ထုတ်ယူလိုက်သည်။ အနက်ရောင်မှင်နှင့် ကသောကမျောရေးထားသော စာကြောင်းနှစ်ကြောင်း။
ငါတို့အားလုံးဟာ ဆက်စပ်နေတယ်။ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးဟာလဲ တစ်မျိုးတည်းသော အရာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။
နောက်ထပ် ကပ်ပြားတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
အပြာရောင်မှင်တွေနဲ့ ရေးထားသော ကဒ်ပြားတစ်ခု ထပ်ထွက်လာသည်။
ငါတို့အားလုံးဟာ စွမ်းအင်တွေထဲမှာ နေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ မသိသေးတဲ့အရာတွေကို ခံစားချက်တွေနဲ့ သိဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
ထိုနေ့က မိုးတွေရွာနေသည်။ လှည်းတန်းတလျောက် လူစည်ကားနေသည်။ ထမီအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ရွှဲရွှဲစိုနေသည်။ ထီးတစ်လက်တည်းအောက်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်မောင်းချင်း မထိမိအောင် ဂရုစိုက်လမ်းလျောက်နေရသည်ကိုက ရင်ခုန်စရာဖြစ်နေလေသလား။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီး နောက်ထပ် ကဒ်ပြားတစ်ခုကို ထုတ်လိုက်သည်။
တိတ်ဆိတ်မှောင်မဲတဲ့ ညမှာ မှောင်မဲနေတဲ့ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာမှမမြင်ရလို့ ဘာမှမရှိဘူးမထင်လိုက်နဲ့။ မမြင်ရတဲ့ dark matter ကြီးဟာ ပိုက်ကွန်ကြီးတစ်ခုလိုပဲ။ ဒီပိုက်ကွန်ထဲမှာ ငါတို့ဘယ်လိုမှ မမြင်နိုင် မထိနိုင်တဲ့ မိုက်ခရိုလှိုင်းတွေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေ ဟာ ငါးတွေလိုပဲ ကူးခတ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် မမြင်နိုင်တိုင်း မရှိဘူးလို့မထင်ကြဖို့လိုတယ်။
မိုးရေတွေကြောင့် ထမီတွေရွှဲရွှဲစိုရုံမက အသစ်စက်စက် ကတ္တီပါဖိနပ်လေးပါ စိုနင့်နေပြီ။
သူ့စကားကြောင့် မိုးငွေ့တွေတွဲခိုနေသော သူ့ဆံနွယ်တွေကို မော့ကြည့်ပြီး ခေါင်းငုံ့ချလိုက်မိသည်။
ခေါင်းငုံ့ပြီး နောက်ထပ် ကဒ်ပြားတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
ကလပ်စည်းပေါင်း ထရစ်လီးယန်း၅၀ နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူတွေကိုယ်ထဲက ကလပ်စည်းတွေကို ဓာတ်ခွဲခန်းထဲက ဗိုက်တာမင် ကန်တစ်ခုထဲကို ပစ်ထဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။ ခွန်အားတွေပြည့်ပြီး ဆက်လက်ရှင်သန်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ အဆိပ်ရည်ထဲကို ထဲ့လိုက်ပါ။ ငါတို့ဆဲလ်တွေ ညိုးလျော်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။
မီးပွိုင့်အနီကိုစောင့်ရင်း မိုးသည်းသည်းအောက်မှာ လွယ်အိတ်ကိုပိုက်ပြီး ချမ်းလွန်းလို့ တုန်တက်နေမိသည်။
“ငါ့ ဂျက်ကက် ၀တ်မလား”
ပြောပြောဆိုဆို ကားလမ်းကူးရန် ပလက်ဖောင်းအောက်ကိုဆင်းလိုက်သည်။
“ဟာ…ဟေ့ နေဦးလေ၊ ကားတွေလာနေသေးတယ်”
လက်မောင်းကို ဖမ်းဆွဲလိုက်သည်ကို မရုန်းမိ။ ပြီးတော့ တစ်ဖက် ကားလမ်းထိ ကလေးတစ်ယောက်ကို ဆွဲခေါ်သလို ခေါ်သွားရင်း တပျစ်တောက်တောက် ပြောနေသည်ကို နားထောင်နေမိသည်။
နှုတ်ခမ်းကို ယောင်ယမ်းကိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ ကဒ်ပြားနောက် နှစ်ခုကို ဆက်တိုက် ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
စိတ်ရှုပ် စိတ်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင် ဦးနှောက်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှု အောက်မှာ ကော်တီဆော်လ်တွေ ယိုစိမ့်လာပြီ။ ဒီကော်တီဆော်လ်တွေ ယိုစိမ့်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့ ခွန်အား၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှု၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေကျလာပြီး အမှားတွေလုပ်ဖို့ပိုများလာတတ်တယ်။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံလို့ရလာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ အက်ဒ်ရေနလင်နဲ့ နော်အက်ဒ်ရေနလင် တွေဟာ ကိုယ်ထဲမှာ ပျံ့နှံ့လာတတ်တယ်။ အဲဒီချိန်မှာတော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေတက်လာတယ်။ ခွန်အားတွေပြည့်လာတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းအင်တွေလဲ မြင့်လာတယ်။
“ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ လာ ဒီဆိုင်ထဲသွားရအောင်”
စတိုးဆိုင်ပေါက်ဝက အလှပြ ရွှေးပြားငွေပြားတွေ မိုးရေတွေအောက်မှာ လွန့်လူးနေသည်။ ဆိုင်ထဲက မှန်ဘီဒိုတွေထဲမှာ ပစ္စည်းတွေက အမျိုးစုံလင်လှသည်။
ထမီတွေ စီထပ်ထားသည့် ကောင်တာရှေ့မှာ သူရပ်နေသည်။
“ဘာလဲဟာ.. ငါရှက်တယ်” သူ့နောက်မှာ ရပ်ရင်း ခပ်တိုးတိုးကြိတ်ပြီး ပြောလိုက်သည်။
“ငါလဲရှက်တာပဲ..ဟ” သူကလဲကြိတ်ပြီး ပြန်ပြောသည်။
ကောင်တာနောက်က ရွယ်တူ မိန်းကလေးတွေက ပြုံးစိစိ။
“နင် ဟိုမှာချမ်းလို့ ၀တ်လို့မရလဲ သိမ်းထားဟာ.. နော်”
“အင်း” မပွင့်တပွင့်ပြောလိုက်သည်။ ဘာကိုရှက်မှန်းမသိရှက်ပြီး စိတ်ကလဲညစ်နေသလိုလို ကြည်နူးနေသလိုလို။ စက္ကုအိတ်ထဲက ငပိရောင်ထမီလေးကို သူလှမ်းပေးတော့ လှမ်းယူပြီး ရင်ခွင်မှာ ဖက်ထားလိုက်သည်။
၀တ်ထားတဲ့ ငပိရောင်ထမီလေးကို ငုံ့ကြည့်မိလို့ ယောင်ယမ်းကာလက်နဲ့သပ်မိလိုက်သည်။ သည့်နောက် ကဒ်ပြားနောက်တစ်ခုကို လွယ်အိတ်ထဲမှာ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
Emotions are contagious. ခံစားချက်ဆိုတာ ကူးစက်တဲ့အရာ…။
တစ်စုံတစ်ယောက်က (emotional toxins) အဆိပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဒေါသ၊ ချိမ်းခြောက်မှု၊ ၀န်တိုမှု၊ မနာလိုမှုတွေကို မိမိကိုယ်ပေါ်ကို သွန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်၊ စိတ်တွေဟာလဲ ညစ်ညူးသွားတတ်တယ်။
Every interaction has an emotional cost or benefit. ဒါကြောင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတိုင်းဟာ မိမိစိတ်ဓာတ်ကို အရူံး သို့မဟုတ် အမြတ်ထွက်စေတယ်ဆိုတာ အမြဲသတိရှိဖို့လိုတယ်။
စက္ကူအိတ်လေးကို ပိုက်ပြီး လွယ်အိတ်တွေထားတဲ့ ကောင်တာဘက်ကို သွားလိုက်သည်။
“ငါလဲ နင့်ကို လွယ်အိတ်လေး ၀ယ်ပေးမယ်နော်”
“ဟေ့အေး အမှတ်တယပေါ့နော်၊ နင်အမြဲတော့လွယ်ရမယ်”
မှန်ဘီဒိုထဲက အပြာရောင်လွယ်အိတ်လေးကို ရွေးယူလိုက်သည်။
အပြာရောင်လွတ်အိတ်လေးကို ရင်ခွင်မှာ ပိုက်ရင်း သူဆိုသည်။
“အော်... မဟုတ်ပါဘူး ဆရာထီးသီချင်းပါ..” ရယ်ကျဲကျဲနှင့်သူဆိုရင်း လွယ်အိတ်ပြာလေးကို ရွှတ်ဆို တချက်ငုံ့နမ်းလိုက်သည်။
အပြာရောင်လွယ်အိတ်လေးထဲက နောက်ဆုံးကျန်နေသည့် ကဒ်ပြားတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဇန်ဘူကာရဲ့ စာသားအချို့ကို ထုံးစံအတိုင်း ကသောကမျောရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရသည်။
We get what we give and to the same degree.
And not always from the same people with whom we’ve dealt.
But somewhere… sometime…someone will treat you in like
The good that we do to others will return also.
For your kindness to others you will receive hospitality in far
Understand the troubles of others who come to you with their souls bared…and when you cry yourself, you will be sympathetically understood.
This is the law and it is inevitable.
ဘာမှ မကျန်တော့သော လွယ်အိတ်ပြာကို ရင်မှာ ပွေ့ထားလိုက်သည်။ မျက်စိကို အသာမှိတ်ထားရင်း ကုတင်စောင်းမှာ ငြိမ်သက်စွာဆက်လက်ထိုင်နေမိသည်။
အပြင်မှာ ကမ်းစပ်လှိုင်းပုတ်သံ၊ ကျီးကန်းအော်သံနှင့် တူထုသံကို ဆက်လက်ကြားနေရသည်။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:01 AM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:31 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ပန်းချီ
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ၂၊ အမှတ်၂။
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ၂၊ အမှတ်၂ထွက်ပါပြီ...။
ကျွန်မရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ် နဲ့...
မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုလုံးကို သွားချင်ရင်တော့ ဒီကို သွားပါရှင်...။
ဒီတစ်ခါ သံလွင်မဂ္ဂဇင်းက ပိုကောင်းနေတဲ့ အချက်တွေများစွာထဲက တစ်ခုက ကော့မန့်တွေ၊ ဝေဖန်ချက်တွေရေးလို့လဲရတယ်၊ ပရင့်ထုတ်လို့လဲရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီလဲ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပိုစ်လေးတွေကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့လို့လဲရပါတယ်..။ ဖိုရမ်၊ ဧည့်သည်တွေရဲ့မှာတမ်း၊ အရောင်စုံပန်းချီလေးတွေနဲ့ ဝေဆာနေလိုက်ပါသေးတယ်။ မကြာခင် လေးနှစ်ပြည့်တော့မယ့် သံလွင်အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်းကို ဆက်လက်အားပေးလိုက်ကြပါစို့နော်..။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:16 PM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 8:18 PM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကျေးဇူး
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 7:03 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
နွေရာသီရောက်ပြီဆိုရင် ခြံထဲက ပန်းပင်လေးတွေ အမှတ်တယ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဝေမျှနေကျပေမယ့် ဒီနှစ်နွေက ခြံထဲတောင် သိပ်မဆင်းဖြစ်လို့ အပင်တွေလဲ တချို့ ရေငတ်နေကြပြီ…။
အဲဒါ ကျမ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်လို့ အလွန်ထွားကျိုင်းသန်မာနေသော၊ အရွက်ဖားဖားနဲ့ စိမ်းလန်း မွှေးပျံ့နေသော၊ ဂစ်နစ်စံချိန်တင်လောက်သော အမွှေးနံ့သာပင်……..
လို့ ... မထင်လိုက်ပါနဲ့…။
တစ်ခြံလုံးကို မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ပေးစွမ်းနိုင်တာမှန်ပါတယ်၊ ဘေးအိမ်က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနွယ်ဖွားတို့ မျက်စိကျနေလို့ ခဏခဏ ဖြတ်ဖြတ်ပေးရတာလဲမှန်ပါတယ်။ ကျမ သိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ မနှစ်က ၀ယ်စိုက်ပြီး ရေလဲမလောင်း ဒီတိုင်းပစ်ထားလိုက်တာ၊ ဒီနှစ်ဆောင်းကုန် နွေအကူးမှာ ရုတ်တရက် အပင်က ထွားတက်လာလိုက်တာ အခုတော့ ရင်ဘတ်လောက် ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျမရဲ့ ပူဒီနံ အပင်ပါပဲရှင်..။
ခြံထဲဆင်းရင် တစ်ခြံလုံးမွှေးနေတာပါပဲ။ အပင်ထွားလွန်းတော့ အရိုးကတော့ ရင့်သွားပြီမို့ အရွက်ကိုပဲ ဟင်းအမျိုးမျိုးထဲ ကျွန်မထည့်စားတော့တာပါပဲ။ တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအပြင်၊ ဘေးအိမ်က သီရိလင်္ကာမောင်နှံပါ ပူဒီနံဖိုး သက်သာတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒီအပင်ကတော့ Honey Suckel လို့ခေါ်တဲ့ မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့ရှိတဲ့ ခြုံနွယ်ပင်တစ်မျိုးပါပဲ..
သူကတော့ အင်းကြင်းပွင့်ရနံ့ မျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်..။။
ညနက်လာတော့ အဲဒီပန်းနွယ်ခြုံအောက်မှာ တစ်လှုပ်လှုပ်တစ်ရွရွဖြစ်နေတာနဲ့ ကျမ ကြည့်နေတာ ရုတ်တရက် ခြုံအောက်က မဲမဲအလုံးလေးတွေထွက်လာတယ်။
အသည်းကယား၊ လန့်လဲလန့်ပြီးကြည့်နေတာ …..
ည လူခြေတိတ်တော့ ထွက်လာတာ.. တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတာနဲ့ အမြန် ကင်မရာယူပြီး ရိုက်ယူထားလိုက်တယ်…
အဲဒီညက လေတွေက တိုက်နေတယ်….။ လေထဲမှာ ပန်းနံ့တွေနဲ့ ပူဒီနံ အနံ့တွေ သင်းနေတယ်..။
နွေညတွေကတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် လှပနေတတ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:08 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ပန်းလက်
အတ္တနဲ့ မောဟတွေ မရှိသလို…
မာန်မာန နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လိုမှုတွေမရှိ သလို
အနိုင်ယူလိုမှု တွေ နဲ့ ငြင်းခုန်မှုတွေ မရှိဘူး။
သံယောဇဉ်နဲ့ တိမ်းမူးမှုတွေ မရှိဘူး…။
ကလက်တက်တက် ရယ်မောသံတွေ မရှိသလို…
ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေသံတွေလဲ မရှိဘူး…။
အချစ်ကို တောင်းစားသူတွေနဲ့ ဒါးမြတိုက်စားသူတွေလဲ မရှိသလို
အချစ်ကို ဒူးထောက်ပေးနေသူတွေနဲ့ ...
ကြိမ်းမောင်းလို့ အတင်းထိုးထည့်နေသူတွေလဲ မရှိဘူး။
အချစ်အစစ် နဲ့ အချစ်တု မရှိသလို
အချစ် နဲ့ အမုန်းဆိုတာကို မရှိဘူး..။
ဝေါဟာရတွေ… ပြောင်မြောက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မရှိသလို
ဆွံအမှုတွေနဲ့ စကားလုံးမဲ့ မှုတွေ မရှိဘူး..။
ဒဲ့ဒိုးစကားတွေ နဲ့ စောင်းပါးရိပ်ခြည်စကားတွေ မရှိသလို..
ဟန်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ အမှန်တရားကို စာတတန်ပေဖွဲ့ ရေးဖွဲ့မှုတွေ မရှိဘူး..။
အချစ်အနမ်းတွေ နဲ့ ကာမ ညတွေမရှိသလို..
အငြိုးအမုန်းတွေနဲ့ စုန်းပြူးညတွေ မရှိဘူး..။
သံယောဇဉ် နဲ့ တိမ်းမူးမှုတွေမရှိသလို…
အားနာမှုနဲ့ ရက်စက်မှုတွေလဲ မရှိဘူး…။
လိမ်ညာတဲ့ အနမ်းတွေ နဲ့ ဟန်ဆောင်တဲ့ အပြုံးတွေမရှိသလို
မိကျောင်းမင်းမျက်ရည်နဲ့ အရိုးမဲ့လျာတွေလဲ ရှိမနေဘူး..။
တဒင်္ဂအချစ်တွေနဲ့ ထာဝရအမုန်းတွေလဲ မရှိဘူး။
ဆောင်ရွက်သင့်တာကို ပြီးစီးသွားမှု တွေနဲ့…
တံခါးတစ်ချပ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ချပ်ကို ဖွင့်ထွက်သွားမှု တွေပဲ ရှိနေတယ်။
မတော်တရော် အတ္တတွေကို သယ်မလာကြဖို့..
အဆိပ်သင့်နေတဲ့ နေ့ ည တွေ မပျံ့လွင့်စေဖို့…
ပီပြင်တဲ့ စည်း.. တစ်ခုတော့ရှိသင့်တယ်…။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:48 AM 8 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ